Sei Dhizaini David Bridburg Achigadzira Chekutanga Basa
Wako Artist Innovator David Bridburg
Kutenda kwangu, hunyanzvi mutauro wakapamhama pane iro rinotaurwa izwi. Kupa chirevo kumifungo yehunyanzvi varaidzo uye chiitiko chekuziva chinoita kuti mumwe nemumwe wedu ave munhu chaiye.
Muchidimbu, Postmodernism ndiyo synthesis yekare uye yazvino. Kufungidzira kwangu kuri kuona uye kufunga.
Kuendesa pfungwa dzangu kune yekudhinda maitiro ndiyo nzira yangu yekugovana neruzhinji.
Vanhu vane chekuita nehunyanzvi hwekuona vari pachinangwa chekutsvaga inonakidza muviri wemifananidzo. Ndinovimba, ini ndakakurudzira kudya kwako.
Imwe yemifananidzo yangu yakanyoreswa neUS Copyright Office. Basa rangu harisi muPublic Domain.
KUWANA ZVIMWE ZVAKO
Rega nditaure, ini ndine dambudziko rekuongorora dambudziko, hurema hwekuzvarwa. Dambudziko racho harina kuongororwa kusvikira ndave nemakore makumi maviri nemasere.
Muna 1981, ndakasiya Bloomfield High School, CT, ndichienda kuYunivhesiti yeHouston kunodzidzira huinjiniya. Ndaisuwa kumba, uye ndichiona zvichindiomera kudzidza. Kuuya kumba pazera ramakumi maviri, ndakatanga kushanda nzira yangu kuburikidza neUCONN.
Kudonha mune hunyanzvi netsaona, ini ndakanyoresa mumakirasi ekuona ehunyanzvi kuti ndizadzise sarudzo dzangu dzepamoyo, uye ndikave mudzidzi weA. Mukudzokorora, iyo hunyanzvi dzidzo yandainakidzwa nekugamuchira yaive yakanaka.
Ndapedza koreji, ndaida kuzove muzvinabhizinesi. Pfungwa dzounyanzvi dzakambovapo, ini ndaisada kugadzira mifananidzo yekunyepedzera kana isinganzwisisike. Kugadzira chimwe chinhu pamwe neimwe mitsara kwaive kufona kwangu.
Muna 2006, ndaive nepfungwa yekutora mufananidzo mune mumwe mukuru kupenda uye kuisa mumufananidzo unotevera ndichishandisa makomputa. Dai zvirizvo zvandakanga ndafunga kuita, nyaya yacho ingadai yakapera.
Muna 2012, ndichidzidza ndega, ndakazvidzidzisa Photoshop. Na2014, ini ndanga ndichiunganidza mazano ekuenda mukugadzira. Kushanda padhijitari kwakandipa nzira nyowani dzekubvisa pamacro uye madiki emazinga.
Unyanzvi hwangu ndiPostmodernism. Yekutanga axiom yePost Yemazuva Ano Art ndeyekuti zvese muhunyanzvi zvakatoitwa. Zvinoshamisa kuti, yangu Postmodernism aesthetics itsva kune vateereri.
Nhasi semunhu akazvimiririra ari kutsikisa muimbi, ndiri kupa yangu katalog online.
FineArtAmerica Corp, yakachengeteka nenguva kudhinda kwepasirese & kutumira. Kuunza vatengi vangu chiitiko chinoshamisa chekutenga kuburikidza Bridburg.com.
Ose maodha anozadziswa nePixels / FineArtAmerica Corp. neyavo kugutsikana Guarantee (Dzorera Policy). Kune mibvunzo nezve yako odha kufonera vatengi vevhisi (kudzokorora odha nhamba) 24hours / zuva 7days / vhiki. Yezve USA Vatengi Service runhare: (877) 807-5901. Yezve UK Vatengi Service runhare: 0800-014-8971. Pixels Corporation inotungamirwa muSanta Monica, CA.
Mubvunzo: Uri pane basa rekutsvaga muimbi wepakutanga here? Ongorora izvo zvinogadzira yakasarudzika mifananidzo.